ललितपुर ह’त्या प्र’करण (अपडेट): पुर्व सचिवमाथि नै शंका ! मुना कार्की ह’त्या प्र’करणले लियो नयाँ मोड (भिडियो सहित) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/ललितपुर ह’त्या प्र’करण (अपडेट): पुर्व सचिवमाथि नै शंका ! मुना कार्की ह’त्या प्र’करणले लियो नयाँ मोड (भिडियो सहित)
ललितपुर ह’त्या प्र’करण (अपडेट): पुर्व सचिवमाथि नै शंका ! मुना कार्की ह’त्या प्र’करणले लियो नयाँ मोड (भिडियो सहित)
यसै बिषयमा केन्द्रित रहेर कलाकार तथा संचारकर्मी सबिता भट्टराईले पनि शंकाको सुई अर्जुन कार्कीतर्फ नै मोडिएको खुलासा गरेका छन् । अनुसन्धानका क्रममा मुनाको महिनावारी चलिरहेको तथ्य बाहिर आएसँगै त्यस्तो बेला पूर्वसचिव कार्कीले रुद्री पूजा लगाउने भनेर मदिर जानु आफैंमा अत्यन्त संकास्पद देखिएको उनले बताएकी छिन् ।
घ’टना अझै पनि अन्योलमा रहेको भन्दै भट्टराईले गाडीको बिषयले थप शंका पैदा गरेको बताएकी छिन् । उनले यदि उनी नै दो’षी देखिएमा उनलाई त के प्रधानमन्त्रीलाई समेत छोड्न नहुने जिकिर गरेकी छिन् । प्राप्त सिसिटिभी फुटेज र हिजो सार्वजनिक भएको पो’स्टमार्टम रि’पोर्टका अनुसार पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुनाको डोरीले घाँटी क’सेर ह’त्या गरेको पो’स्टमार्टम रि’पोर्टबाट खुलेको छ। तलको भिडियो हेर्नुस् :
दशैँका लागि खसी किन्न गएका १६ बर्षीय जनक खत्रीको आफ्नै अंकलले गरे हत्या !
महिनाको १ लाख ५० हजार कमाउने अटो दिदीको जीवन कथा, भन्छिन – गाउलेले कुरा काट्दा धेरै रुन्छु, दर्दनाक